Duqeymo diyaaradeed oo shalay lala beegsaday goobo ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo Baay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Weeraro kala duwan oo loo adeegsaday diyaarado ayaa shalay lagu qaaday xarrumo Alshabab ku leeyihiin gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay.
Sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ilaa 45 ka tirsan al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo shalay galab ka dhacay tuulada Dugule ee gobolka Shabeelada Hoose.
Guddoomiyaha oo wareysi siiyay BBC ayaa sheegay in ay hayaan xog ku saabsan khasaaraha uu geystay weerarka cirka, oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen saddex gantaal oo lala beegsaday goobo kala duwan oo uu ku jiray guri ay degenaayeen dagaalyahaniin ajnabi ah.
Waxaa kale oo uu sheegay in mid ka mid ah gantaallada uu ku dhacay kolonyo baabuur ah oo ay wateen al-Shabaab, halkaasi uu yiri waxaa ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac u dhaxeysa 45 ilaa 60.
Degaanka uu weerarku ka dhacay ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa Shabaabku ay gacanta ku hayeen dhawrkii sano ee ugu dambeeyay.
Dhanka kale, ilaa shan qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen weerar duqayn ah oo diyaarado aan la garanayn ay shalay galab ku qaadeen degmada Diinsoor ee gobolka Baay.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in duqaynta lala beegsaday oo lagu burburiyay guri ku yaalla gudaha magaalada oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Lama xaqiijin in weerarka ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale, hase yeeshee waxaa lagu soo warramayaa inay weerarka ku dhinteen dad rayid ahaa.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, maamulka KMG ah ee Koonfur/galbeed iyo Al-Shabaab ayaan wali ka hadlin duqaynta ay sii weriyeen dadka deegaanka.
Baarlamanka oo ogolaaday 10 maalmood oo RW Cumar kusoo dhameystirayo xukuumadda